Kedu ihe ị ga-eme mgbe ị wụnye CentOS 7? Nduzi ngwa ngwa. | Site na Linux
petercheco | | Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ
Ndewo ndị enyi sitere na FromLinux, dị ka ị maara na m bụ onye na-enweghị ike izu ike ma na-etinyekarị disros na anụ ọhịa ahụ iji nye gị nduzi. Mana nke ahụ na-efu nnukwu mgbalị, ọrụ na oge yana ọ na-agwụ ike ịtinye usoro ahụ kwa ọnwa :)
Mgbe m kwuchara nke a, ekpebiri m ịnọ naanị na usoro ntọala m ga-eji wee rụọ ọrụ. M họọrọ dị ka isi usoro a CentOS 7 con Gnome-Shell ebe ọ bụ na gburugburu ebe a bụ ihe kachasị arụpụta ihe m maara.
Tupu ịmalite, ana m enye gị ụfọdụ ihe oyiyi:
Ugbu a ka anyị bido ịkwado usoro ihe ọhụrụ anyị.
Dị ka mgbọrọgwụ anyị kpere
yum melite & yum autoremove && yum wụnye yum-ngwa mgbakwunye-mkpa
yum tinye epel-ntọhapụ
Ha na-ebudata ndị a .rpm ma wụnye ha:
Ugbu a ị nọ n'ime / wdg / yum.repos.d ha dezie niile repos na-egosi na kwuru ndekọ na-agbakwunye ndị na-esonụ na-ebute ụzọ maka iji na njedebe nke ọ bụla repository:
mkpa = 1 maka CentOS-Base.repo, epel.repo mkpa = 10 maka nux-dextop.repo, adobe-Linux-x86_64.repo
# CentOS-Base.repo # # Igwe enyo na-eji adreesị IP nke ndị ahịa yana ọnọdụ # melite nke enyo ọ bụla iji bulie enyo nke emelitere na # geographically nso onye ahịa ahụ. Kwesịrị iji nke a maka mmelite CentOS # belụsọ ma ị jiri aka gị na-ewere enyo ndị ọzọ. # # Ọ bụrụ na mirrorlist = adịghị arụ ọrụ maka gị, dị ka ịda azụ ị nwere ike ịnwale # kwuru si baseurl = akara kama. # # [base] aha = CentOS- $ releasever - Base mirrorlist = http: //mirrorlist.centos.org/? release = $ releasever & arch = $ basearch & repo = os & infra = $ infra # baseurl = http: / /mirror.centos.org / centos / $ releasever / os / $ basearch / gpgcheck = 1 gpgkey = faịlụ: /// wdg / pki / rpm-gpg / RPM-GPG-KEY-CentOS-7 mkpa = 1 # weputara mmelite [mmelite] aha = CentOS - $ ntọhapụ - Mmelite mirrorlist = http: //mirrorlist.centos.org/? release = $ releasever & arch = $ basearch & repo = mmelite & infra = $ infra # baseurl = http: // mirror ) bara uru [mgbakwunye] aha = CentOS- $ releasever - Extras mirrorlist = http: //mirrorlist.centos.org/? Hapụ = $ releasever & arch = $ basearch & repo = mgbakwunye & infra = $ infra # baseurl = http: / /mirror.centos.org/centos/$releasever/extras/$basearch/ gpgcheck = 1 gpgkey = faịlụ: /// wdg / pki / rpm-gpg / RPM-GPG-KEY-CentOS-7 mkpa = 1 # mgbakwunye agbakwunyere nke ahụ na-agbatị ọrụ nke nchịkọta ndị dị ugbu a [centosplus] n ame = CentOS- $ releasever - Plus mirrorlist = http: //mirrorlist.centos.org/? release = $ releasever & arch = $ basearch & repo = centosplus & infra = $ infra # baseurl = http: //mirror.centos. org / centos / $ releasever / centosplus / $ basearch / gpgcheck = 1 nyeere = 7 gpgkey = faịlụ: / // wdg / pki / rpm-gpg / RPM-GPG-KEY-CentOS-1
Ozugbo emezigharịrị ihe ndị anyị kwuru n'elu, anyị na-aga n'ihu:
yum wụnye java-1.7.0-openjdk icedtea-web thunderbird firefox libreoffice libreoffice-langpack-es filezilla p7zip unzip zip gimp kernel-devel dkms telnet mc wget htop ntfs-3g yum install gstreamer-plugins-good gstreamer-plugins plugins-mummum yum groupinstall "Development Tools" "Development Libraries" yum install vlc lm_sensors unrar foomatic sensọ-chọpụta
Na ndị enyi dị njikere. Site na nke a CentOS 7 anyị kwadebere 🙂
Ekele m na Afọ Ọhụrụ 2015.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Kedu ihe ị ga-eme mgbe ị wụnye CentOS 7? Nduzi ngwa ngwa.
dị mma tuto :), M na-ohere iji jụọ ọ bụ eziokwu na centos ga-inyefe ntọhapụ?
You na-aga ịme mkpọsa?
N'isiokwu ahụ enwere njikọ na listi nzipu ozi CentOS.
Ihe m ghotara bụ na ha ga-eme otu ihe ahụ dị ka Debian mgbe ịtọhapụ ụdị 7.x dịka ọmụmaatụ.
Mba, CentOS ma ọ bụ RHEL abụghị ma ọ gaghị eweghara.
Ihe emere bụ na ụlọ ọrụ mgbasa ozi na-agbagharị. Ka m kọwaa ... Ruo ugbu a, mgbasa ozi nwụnye bụ otu ebe ụfọdụ ụdị nke CentOS pụtara. Maka nke a, ozugbo etinyere ya, ị ga-etinye ọtụtụ narị megabytes ma ọ bụ ọbụna gigabytes na mmelite mbụ.
Ugbu a, ihe ị ga - eme bụ ịgụnye mmelite niile na igwe mgbasa ozi, yabụ mmelite izizi ga - abụ ihe megabytes.
Mgbe m gụsịrị akwụkwọ ntuziaka a, achọrọ m ka m wụnye Centos, mana agaghị m. O kariri nke m. Gini mere ị naghị eme ihe ndu ka ị wụnye Centos maka ntugheriukwu?. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile m hụrụla n’ebe a na-ekesa ya bụ Bekee.
Site na Peter, gini ka nwatakiri nwoke dika gi na eme ebe dika Czech Republic? Girlsmụ agbọghọ. . . Kedu ka ị mere?
Girlsmụ agbọghọ ahụ dị mma, ee, mana ihe kpatara m ji nọrọ ebe a bụ n'ihi na enwere m ọrụ nke mere m ga-eji gaa n'etiti Czech Republic na Spain: D.
Banyere onye ndu, nke a bụ ihe nduzi maka ntugheriukwu ... Mfe, doro anya na ngwa ngwa: D.
Obi abụọ adịghị ya na ihe ị chọrọ bụ ServOS, budata ụdị 2.0 nke dabere na CentOS 7 ma nwee gnome3 na ndabara dị njikere iji ya mee ma hazie ya na Desktọpụ, ọ ga-eju gị anya. Ọ bụ ntọhapụ na-agbanwe ma nwee nkwado ruo 2024 🙂
Ezubere LiveCD maka Sava ebe ọ bụ naanị ya nwere ntọala ma nwee 700MB na ISO
LiveDVD bụ onye nwere mmemme niile dị mkpa iji malite ịrụ ọrụ na laptọọpụ gị ma ọ bụ PC yana ọ dị mfe ịwụnye! 🙂
tinye nbudata nke http://www.serv-os.net ma nwaa ya! akwala ụta! 🙂
Ezi ndụmọdụ, ọ bụ ezie na ọ ga-amasị m ka ị mee nkuzi banyere otu esi edochi sistemụ na ụzọ ọzọ.
PS: Ana m anwale ekwentị m nke m napụtara site na nchefu.
Obi ụtọ na New Year 2015 mbụ niile :). O di nwute na (ma obu na obughi) enweghi ike iweputa ya site na CentOS 7 ebe obu na etinyere ya na ihe niile.
N'agbanyeghị nke ahụ, ị ​​ga-ajụ onwe gị ma ọ bụrụ na sistemụ dị njọ nke ukwuu ebe ọ bụ na n'echiche m, a na-agbazi nsogbu ọ nwere (ọbụlagodi na CentOS).
Ọ bụrụ na ịchọọghị sistemụ ma ọ bụ chọọ ihe ọzọ adịghị mma, ị nweghị nhọrọ ma ọ bụghị iji nkesa ọzọ (debian dịka ọmụmaatụ), m na-eme nke ọma na sistemu na desktọọpụ mana na sava m na-eji ọdịnala ọdịnala, nke ka ukwuu iji zere Mbugharị
esi arụnye Centos dị ka ihe nkesa?
You na - ebudata obere cd, wụnye ya wee gawa. Ga-enweta CentOS na-enweghị X yana ya zuru ezu maka sava ahụ.
Ana m anwale ya ụbọchị ndị a, ọ dị mma nke ukwuu, m na-anwa iwepụ networkmanager n'ihi na ọ dị m ka m gafee oke maka ip static mana o mebiri usoro ahụ, enweghịzi daemon networking dị ka centos 6? Systemd nwere ihe a ga-eme?
@dhunter ịkwesighi iwepu ngwugwu ọ bụla, iji mee ka ọ dị mfe, hazie ihu na ozugbo ịhazi ya, site na ọnụ;
sudo systemctl gbanyụọ NetworkManager
ma obu dika na mbu na ha dakọtara:
sudo chkconfig NetworkManager apụ
sudo systemctl gbanye netwọkụ
network chkconfig na
Nwere ike ịga n'ihu n'iji ọrụ ahụ. —- bido ma ọ bụ bidogharịa iwu ka ha dakọtara 🙂
Zaghachi Jose Cuervo
Naanị ihe m na-achọ.
O lee otu ị si eme na centos 7?
Na ederede ọzọ ị kwuru na n'uche gị ọ na-arụ ọrụ karịa fedora 21.
Ya mere achọrọ m ịjụ gị ma ị nwere ike iwunye vmware 11 na gns3 1.2 na centos 7.
Ọ ga-amasị m ịmara ịwụnye ya xD
Tupu m jiri oghereuse 13.2 wee nwee mmemme 2 a na-agba ọsọ mana mgbe ị na-eme ihe
Ihe oyiyi 3 na vmware laptọọpụ m na-atụ egwu oge ụfọdụ. M nwere 12Gb ebule na i7 processor.
na-enyocha google Ahuru m na cache ebulu ahụ gbagoro ọtụtụ maka ihe onyogho ndị ahụ na vmware, ejiri m kde na
M mere lxde nke onyonyo ahụ na - enweghị nsogbu (onyonyo ọ bụla nwere 2gb ebule).
Gịnị kpatara nke a? XD naanị n'ihi na desktọọpụ dị ọkụ? Ekwesịrị m inwe ọtụtụ RAM ebe m nwere 12GB mana oghere cache ọ na - ewepụta wegara ya n'elu xD.
Agara m isi na isi okwu a, achoro m iju gi kedu ka imere centos 7.
; Daalụ maka post gị Ana m agụ ọtụtụ xD, kedu ka freebsd gị si dị? ọ ga-arụ ọrụ nke ọma na laptọọpụ m? You nwere mmemme m na-ekwu maka ya? haha ozo ahapuru m isiokwu xD
Ndewo, CentOS 7 dị ezigbo mma. Will ga-enwe ike ịwụnye mmemme abụọ ahụ ma enwere ọtụtụ ozi gbasara ya.
Banyere FreeBSD enwere ike iji ya mee ihe ọ bụla. Ọ dịghị mkpa ma ọ bụrụ na ọ bụ na sava, PC ma ọ bụ laptọọpụ… N'ezie, na PC na laptọọpụ ọ na-ata. Ekwadoro m iji FreeBSD naanị na sava.
Na-agbanwe ọzọ distro karịa jaket Petercheco. Ọ bụ eziokwu na Freebsd na desktọọpụ adịghị enwe ahụ iru ala, mana mgbalị ọzọ a chọrọ ime karịrị ụgwọ ọrụ. Freebsd nwere ọtụtụ teknụzụ dị elu karị, dịka ọmụmaatụ zfs na Dtrace nke bụ ezigbo ịtụnanya. Ma gịnị kpatara na ị gaghị ekwu ya, ọ nweghị nnwale ahụ a na-akpọ lennartOS (oops, sorry, systemD xD).
Ndewo @ weyland-yutani,
Obi ụtọ afọ tupu ihe ọ bụla ọzọ: D. Anaghị m ekwu na FreeBSD dị njọ na m na-edebe ya na ihe nkesa ebe ọ bụ na mmejuputa ya na sava dị oke ọsọ ma ọ dịkarịa ala n'echiche m karịa "na-eduzi" karịa na nwanne nwanne ya Linux yana ịnọ na ọkwa ọzọ mgbe ọ bịara na nchekwa n'etiti ndị ọzọ.
Ma na pc na laptọọpụ m ka ọ ghara iru ala ebe ọ bụ na ịnweghị obi ụtọ, ihe yiri NetworkManager ma ọ gaghị aba uru na wifimgr ma ọ bụ n'ihi nsogbu nke ịnwe eriri diski mgbe niile. Na mbụ, echeghị m banyere ya, mana mgbe ọnwa mbụ na laptọọpụ mere m ka ọ ghara ime m: D.
CentOS 7 na-ezute m na ihe niile na ihe niile ga-ekwu. Ọ na-arụ ọrụ ya nke ọma. Banyere systemd ... Mmadụ, ọ bụghị na m masịrị ya nke ukwuu, mana na RHEL / CentOS ihe niile na-arụ ọrụ nke ọma na ahụbeghị m ihe ọ bụla dị iche na arụmọrụ nke sistemụ ahụ.
Aghọtara m ọnọdụ gị. Otú ọ dị, abụ m onye njide Arch Linux nke ọma ruo ọtụtụ afọ, nke Arch ochie tupu ọbịbịa nke systemD na mgbanwe na / usr. Ọ bụ ya mere m ji eche dị ka azụ na mmiri na Freebsd, n'ihi na ọ nwere ọtụtụ myirịta dị na Arch ochie. Achọghị m iji ọnụ maka ihe ụfọdụ, dịka ịkwanye diski, ịgba DVD wdg ... ihe ọzọ, Ọ masịrị m n'ụzọ ahụ. N'ihi Freebsd, enwere m ntụsara ahụ na ngwanrọ na-akwụghị ụgwọ ọzọ. Site n'ụzọ, ikikere BSD dị m mma karịa GPL. Ma hey, nke ahụ bụ isiokwu ọzọ ..
Ezi afọ ọhụrụ gị.
Y’oburu n’inwe ezi obi-oma n’ile-anya, libvirt na qemu-kvm echere m na inwere ohere ka nma, vmware bu anumanu.
Anụmanụ VMware banyere nri oriri?.
Ntuziaka ọ bụla dị mma na nke kensinammuo maka gị.
Ezi ụtụtụ, ekele dịrị maka enyemaka mbụ. Ihe nke abuo igwa gi na mgbe m gbaliri:
yum jikọọ "Development Tools" "Development Libraries", enwetara m nke a:
Akwado plugins: fastestmirror, langpacks
Enweghị faịlụ ndị arụnyere.
Eleghị anya na-agba ọsọ: yum dị iche iche akara ntụgharị (lee mmadụ yum)
Loading mirror si cached hostfile
* isi: mirror.tedra.es
* akụkọ: http://ftp.cica.es
* mgbakwunye: mirror.tedra.es
* mmelite: mirror.tedra.es
Dọ aka ná ntị: Nzụlite otu enweghị ngwugwu ọ bụla iji wụnye.
Dọ aka na ntị: otu Libraries Development adịghị adị.
Eleghị anya na-agba ọsọ: yum dị iche iche akara wụnye (lee mmadụ yum)
Enweghị nchịkọta dị na otu ọ bụla achọrọ iji wụnye ma ọ bụ melite
M ga-enwe obi ụtọ ma ọ bụrụ na ị nwere ike inye m aka.
Ndewo, onweghi ihe na eme. Enwere ọdịiche dị n'etiti Fedora na CentOS… "Development Libraries" adịghị na CentOS yana Fedora.
Ọ bụ ya. "Ngwaọrụ mmepe" na-etinye ihe niile n'onwe ya.
Mmụọ ozi-2021 dijo
Daalụ nke ukwuu maka ama niile. Ọ magburu onwe ya, debe ya!